Manan-javatra ivavahana avokoa isika
Rehefa namorona antsika Andriamanitra dia nataony tao anatintsika, na dia nosimban'ny fahotana tahaka ny zavatra hafa rehetra aza, ny faniriana hivavaka Aminy. Mazava loatra fa tsy natao hivavaka afa-tsy amin'Andriamanitra Tompo sy Mpamorona irery ihany isika tamin'ny voalohany, dia Ilay hany mendrika hiankohofana. Niova anefa ny zavatra rehetra nanomboka teo amin'ny fahalavoana, ary lehibe tokoa izany
Eny tokoa, samy manompo zavatra na olona avokoa isika rehetra. Manampy antsika izany hahatakatra ny antony anaovan'ny olombelona fanompoam-pivavahana hatramin'izay teo amin'ny tantaram-piainany. Tany Egipta fahiny dia nisy ireo izay nivavaka tamin'i Farao mpanjaka. Tamin'ny fotoana sy toerana hafa indray ny olona dia niankohoka tamin'ny sarivongana miendrika trondro, tamin'andriamanitra manana loha maro, ary tamin'ny zavatra hafa koa. Ny sasany nivavaka tamin'ny masoandro, ny volana ary ny kintana.
Ankehitriny dia marani-tsaina loatra ny ankamaroan'ny olona ka tsy miankohoka intsony amin'ny sarivongana miendrika sahona kanefa maro ihany no hiankohoka amin'ny sarivongan'i Maria renin'i Jesôsy. Koa midika ve izany fa tsy mivavaka amin-javatra hafa ny olona, na tsy mpino aza izy? Tsy izany velively. Misy ny mivavaka amin'ny vola ohatra, na fahefana, na ny firaisana ara-nofo, na ny tenany, na mpanakanto malaza, na mpiantsehatra malaza, na mpitondra fanjakana. Izay tiantsika indrindra, na inona na inona, no ivavahantsika, ary koa izay andaniantsika ny androm-piainantsika sy misintona ny fahalianantsika indrindra. Mampitandrina ny mpanoratra iray antsoina hoe David Foster Wallace fa raha ilay tsy tokony ivavahana no ivavahanao dia "hihinana" anao velona izany, izany hoe hamono hahafaty anao.
Araka ny tantara ao amin'ny Dan. 3, nahoana no zava-dehibe ny fiankohofana na ny fivavahana araka ny tokony ho izy, sy amin'llay tokony hiantefan'izany?
Hitantsika fa nitandrina ny didy faharoa (Eks. 20:4-6) tamin'ny fony manontolo ireto Jiosy telo lahy ireto, dia araka izay sitraky ny Tompo hataon'izy ireo. Anisan'ny didy folo rahateo ny didy faharoa, dia ny didy folo izay mandrara antsika tsy hamono olona na hangalatra ihany koa. Koa manan-danja lehibe eo imason'Andriamanitra tokoa izany ny fiankohofana hany ka manjary isan'ny lohahevi-dehibe hisedrana ny olon'Andriamanitra amin'ny andro farany, mialoha ny fiverenan'i Jesôsy fanindroany. Izany no antony tokony hisian'ny fampijimarana ny lohahevitra manontolo mikasika ny fiankohofana ao amin'ny fanabeazana kristianina: inona no atao hoe fiankohofana? Manao ahoana ny fomba fiankohofantsika? Nahoana no manan-danja izany? Ary iza no iankohofantsika?
Vakio ny Apôk. 14:6-12. Inona no ambaran'ireo andalan-teny ireo mikasika ny maha-zava-dehibe ny resaka fiankohofana amin'ny andro farany, dia mialoha indrindra ny fiverenan'i Jesôsy fanindroany?